Sida loo qaabeeyo Word | Hal-abuurka khadka tooska ah
Shaki kuma jiro in barnaamijka Word uusan ahayn mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan qaabeynta. Laakiin macnaheedu maaha in aan la samayn karin sidoo kale, iyo natiijooyin la mid ah kuwa barnaamijyada qaabeynta. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad ogaato sida loo qaabeeyo Word, hadday tahay joornaal, buug ama nooc kale oo daabacaad ah, waxaanu ku siin doonaa fasalada.
Dabcan, waa in aan ka bilownaa in Eraygu xoogaa xaddidan yahay qaab-dhismeedka, taas macnaheedu maaha in aanu si fiican u muuqan doonin.
1 Waa maxay sababta qaabeynta Word
2 Sida loo qaabeeyo Word
2.1 Nooca qaabeynta
2.4 Is waafajinta
2.5 Kala dheereynta khadka
2.6 Ka taxaddar miisaanka faylka
Waa maxay sababta qaabeynta Word
Marka ay timaado in lagu shaqeeyo qaabka, barnaamijyada sida Indesign ayaa aad uga fiican Word, kaas oo weli ah barnaamij qoraal ah oo fudud, laakiin aan sii soconin.
Si kastaba ha ahaatee, hubaal inaad ogtahay in Ereyga uu leeyahay adeegsiyo badan sababtoo ah, miyaanay faa'iido lahayn samaynta miis? Mise kaarka ganacsiga? Mise boodhadh? Haddaba maxaa loo isticmaali waayay qaabaynta?
Waxaa jira dhowr sababood oo lagu barto sida loo qaabeeyo Word. Waxaa ka mid ah:
Waa barnaamij aad si fiican u taqaan. Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa wax badan ku qora Word, markaa hubaal wax dhib ah kuma qabtid inaad ogaato halka ay wax walba ku jiraan. Tani waxay kaa dhigi doontaa inaadan wakhti ku lumin inaad ogaato qaybta barnaamijka ay ku taal, wax kugu dhici kara kuwa cusub.
Uma baahnid barnaamij kale sababtoo ah qaabeynta waa in lagu soo bandhigaa PDF, taas macnaheedu waa in aad ku samayn karto Word dhib la'aan kadibna u rogi PDF adigoon ku dhex dhaqaaqin hal millimitir.
Sababtoo ah waxaad ka dhex muuqan doontaa dhowr. Waa dhibaato kale, gaar ahaan sababtoo ah haddii kooxda u xilsaaran qaabeynta ay jiraan dad aan aqoon sida barnaamijyada qaabeynta xirfadeed ay u shaqeeyaan. Natiijooyin isku mid ah ayaa lagu gaari karaa tifaftiraha qoraalka iyo markaad noqoto mid "caalami ah" waxaad hubisaa in qof kastaa uu ogaan doono sida loola shaqeeyo.
Hadda oo aad ogtahay sababaha kuu horseedi kara qaabeynta Word (waxaa jira qaar badan oo kale), tillaabada xigta waa inaad ogaato sida ay tahay inaad u sameyso.
Guud ahaan, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa faahfaahinta qaarkood.
La mid ma aha in aad rabto in aad buug dhigato marka loo eego waxa aad rabto in aad noqoto kaarka ganacsiga, ama joornaalka. Mid kastaa wuxuu yeelan doonaa qaab kale oo sidaas darteed faahfaahinta waa inaad wax ka beddeshaa sida ku cad daabacaadda la daabacayo.
Tusaale ahaan, buuggu inta badan waa 15 x 21 cm. Laakiin kaarka ganacsigu wuxuu noqon karaa 8 x 10 cm, ama ka yar. Intaa waxaa dheer, hal qodob oo kale oo muhiim ah sida qoraal-qoraalka, margin, xuduudaha, iwm. halka mid kalena uu ka fudud yahay.
Waxaan tan ku beddeli karnaa qaabka dukumentiga. Taasi waa, waxaan ka samayn karnaa xoqan, dukumeenti maran, ama mid hore loo abuuray waxaad bedeli kartaa qaabka si aad ula qabsato waxaad rabto.
Bal qiyaas in aad buug dhigaysa oo aad dhammaysay oo aad daabacdo. Markaad furto buuggii ugu horreeyay, waxaad ogaanaysaa in dhammaan bogaggii ay go'an yihiin, iyo in bilowga aan la akhrin karin sababtoo ah "lagu riixay" meeshaas. Maxaa dhacay?
Jawaabta fudud waxay noqonaysaa: ma ka tagtay xad-dhaaf? Margins sax ah?
Waxayna tahay, haddii waxa aad naqshadaynayso ay tahay buug, joornaal ama wax la mid ah oo tilmaamaya in la "tolli doono" ama "lagu dhejin doono" hal dhinac, waxaad u baahan tahay in xad-dhaafku uu yara sarreeyo. dhinac ah si looga fogaado in xarfaha isku dhow yihiin dhexdeeda.
Si aad fikrad kuu siiso, dhexda sare iyo bannaanka waxay noqon kartaa inta u dhaxaysa 1,7 iyo 2cm laakiin gudaha iyo hoosba way fiicnaan lahayd in laga tago in yar.
Markaad dooranayso farta, waxaad ka fikiri kartaa inaad mid u dhigto cinwaannada midna qoraalka. Ma aha wax aan macquul ahayn, taas oo ka soo horjeeda. Laakiin waxaad u baahan tahay labada xaraf si ay si buuxda loo akhriyi karo.
Intaa waxaa dheer, far kasta waxay leedahay miisaan kala duwan, taas oo macnaheedu yahay, 12, waxay u ekaan kartaa mid yar iyo 18 weyn. Ama in 12 ay u muuqato mid weyn.
Soo jeedintayadu waa inaad isku daydo ka hor intaanad dejin sababtoo ah, haddii aad go'aansato inaad bedesho cabbirka farta marka wax walba la dejiyo, waa inaad mar kale hubisaa sababtoo ah tirada boggu way kala duwanaan doontaa.
Toosintu waxa ay tilmaamaysaa sida aad rabto in qoraalka loo soo bandhigo. Taasi waa, haddii aad rabto in ay udub dhexaad u ahaato, haddii aad rabto dhinaca (midig ama bidix) ama haddii aad rabto in la caddeeyo.
Marka laga hadlayo buugaagta, majaladaha iyo wixii la mid ah, inta badan waa la caddeeyaa sababtoo ah way ka qurux badan tahay. Laakiin maskaxda ku hay in Eraygu kordhiyo meelaha bannaan ee erayada u dhexeeya sababtoo ah ma kala qaybiyo. Ilaa aad si cad u codsato mooyee (tani waxa lagu samayn karaa qaab/paragraph/ socodka qoraalka).
Xaaladaha kale lagama maarmaan ma noqon doonto oo waxaad ka tagi kartaa si toos ah bidixda (inkasta oo haddii aad rabto in kelmadaha la qaybiyo sidoo kale waad awoodaa).
Kala dheereynta khadka
Fogeynta laynka waa inta u dhaxaysa xariiqyada qoraalka. Tani waxay u ogolaaneysaa in si wanaagsan loo akhriyo jumladaha dhexdooda, taas oo caawinaysa akhristaha. Haddii ay aad isugu dhow yihiin waxay ku adkeyn kartaa inay wax akhriyaan, haddii ay aad u kala fogaadaanna ma noqon doonaan kuwo caan ah.
Caadi ahaan, qiimaha la siiyay waa 1,5 boos. Laakiin wax walba waxay ku xirnaan doonaan nooca farta aad rabto inaad dhigto iyo mashruuca aad ku socoto sababtoo ah waxay u baahan kartaa boos badan (ama ka yar). Dabcan, marnaba ka yarayn 1.
Ka taxaddar miisaanka faylka
Marka dukumeentiga la dhigo, wuxuu leeyahay miisaan gaar ah. Dhibaatadu waxay tahay haddii aad ku darto sawirro, garaafyo, miisas, iwm. Word. waxaad ka dhigtaa mid aad u culus taasina waxay saamayn kartaa xawaaraha kombiyuutarkaaga (ma awoodo inuu farsameeyo).
Si taas looga fogaado, waxaa fiican in la qaabeeyo adigoo u qaybinaya dukumeenti dhowr qaybood ah si uu u fududaado oo yeyna noo dhibin in aan dirin ama rarin (tusaale ahaan CD-ga, qalinka, iwm.). Sidoo kale, habkan waxaad hubisaa in xusuusta kombuyuutarku ay ku filan tahay inay ku shaqeyso oo aysan ku siin khaladaad (luminta shaqada aad qabatay).
Wax ka beddelka waxaas oo dhan ee Word waxa aad ku guulaysan doontaa in aad haysato qaab-dhismeedka mashruuca aad gacanta ku hayso. Waana in qaabka Word uusan ahayn mid adag. Waa run in ay ka xaddidan tahay kuwa kale, laakiin haddii aadan u baahnayn inaad sameyso mashruuc muuqaal ah, is-dhexgal, iwm. Waxay kuu adeegi doontaa dhib la'aan.
Ma ku qaabaysay Word? Sidee ahayd waayo-aragnimadaada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sida loo qaabeeyo Word